Kufakwe kuyo UKUBHALA	by UMartin Vrijland	11 Julayi 2019	• 13 Comments
Into enhle! Ukusuka kwingcamango yokomoya, babiza le nkqubo ukuba ivuse. Ukuxhuma kwakhona kunye nxalenye okanye iinxalenye zakho ezihlala / zihlala kwezinye ubukhulu. Wakho owenene, nokuba yiliphi igama ofuna ukuyinika. Kwakhona luhlobo lokukhumbuza malunga nokuba ungubani. Kukho abantu abalala kwakhona emva kokuvuswa. Kwaye kukho abantu abakwazi ukuthetha ngako kuba bacinga ukuba baqonda ezinye zeengcamango kodwa abavukanga ngokwenene. Nabani na ovukileyo uyayiqonda / uyibona.
Ndiyathanda indlela oyichaza ngayo, phantse ngokwemfundo, kodwa zombini inyaniso. Njengoko ndiyibona, abantu abangenazo izilwanyana bayinxalenye yokuncedisa abanye xa bevusa. Kuhle kakhulu ukuba aba bantu abangafaniyo benza 'into yabo'. (ade avuse) Akaziqondi nokuba ziyinxalenye yenkqubo enkulu. Ndicinga ukuba iipolitiki nabantu abasemgangathweni behlabathi abanalo nhlobo ulwazi lomdlalo abakhona kuwo. Badlala kuphela indima yabo (engaziwayo) indima. Baya kuphila kuphela ngokweprogram. Leli lizwe lifanelekile kwaye liyenze into ekumele liyenze. Akukho nto iyakushintsha. Ukuba ufika ekuvukeleni okanye ufumene oku, kubalulekile ukuba ndibuyisele ukuxhamla kunye noBomi bakho bokwenene nokuphila ngokuqinisekileyo. Emva koko unokunceda abanye ekuvukeni kwabo.
Umoya uyichaza ngendlela ethile, kuba ngelo xesha ubuchule bezobuchwepheshe bekungekabikho ukuba sihlala ngokwenene. Iimifanekiso ngoku ziya guqulwa zibe ngokoqobo. Sibheka ngomzimba wethu (ngokusebenzisa le avatar) / udlale kulo mzelelo.
Uvavanyo oluphindwe kabini lubonisa. Indalo iyasebenza njengekhowudi yekhompyutha. "Siphila" kwinkqubo enkulu (i-virus ye-Luciferian).
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.870.551